Kidoro éponge iray no narian’olona tao amin’ny Cité Canada Toamasina, omaly. Natao toa ireny vata-mangatsiaka voafono ireny izany ka nanaitra ny mponina rehetra tao an-toerana ny fahitana izany. zavatra hafahafa izany.
Zaza vao teraka, nisy nanary teny amin’ny renirano fanasan-damba tao amin’ny fokontany Mangarahara, ny asabotsy teo. Tsikaritra tamin’izany fa efa tsy teo intsony ny lohan’ilay zaza sy ny tanany. Manoloana izany, nanao antso avo amin’ny mpiara-monina ny sefom-pokontany sy ny mpitandro filaminana hijery akaiky ny reny nahavita izany.
Nitrangana lozam-pifamoivoizana teny Ambohibao Antehiroka, ny alin’ny asabotsy teo. Kamiao iray sy fiara 4×4 iray nifandona teny an-toerana. Voalaza fa mamo ilay mpamilin’ny kamiao ka tsy voafehiny intsony ny fiara. Tsy nisy ny aina nafoy nandritra ny loza.